PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-17 - EZOTHANDO:
Ilanga langeSonto - 2018-06-17 - Izindaba -
UKUPHINGA nokungathembeki ngenye yezinselelo ezibhekana nabantu abaningi ebudlelwaneni. Lezi zinto zihlasela ngisho abashadile, abanye bagcine befake isehlukaniso kubhidlike imizi.
Abakholelwa emithini yesintu baze bazidlise izithandwa zabo, bazifake ubheka mina ngedwa ngoba begwema ukuba zibone abanye. Kukhona amanye amadoda aze ashaye imithetho engalungile emakhaya ngoba ethi agwema ukuba amakhosikazi angaqomi.
Kuyenzeka uzwe kuthiwa indoda ethile kayifuni inkosikazi isebenze ngoba ibona ukuthi izoqoma. Kugcina sekunyatheleka ilungelo lomunye umuntu nje ngenxa yesikhwele nokungathembani.
Kuyiqiniso ukuthi kubuhlungu ukugilwa ngumuntu omthandayo, ahambe ayophinga ekubeni uzimisele ngaye. Lokho kukwenza uzizwe uphoxekile.
Ukuphinga komuntu omthandayo kushiya isilonda esithatha isikhathi eside ukuphola. Labo abantekenteke abangakwazi ukumela ubuhlungu benhliziyo nokuphoxeka baze benze umonakalo onzima - uthola ukuthi umuntu ubulala isithandwa sakhe, mhlawumbe abulale nezingane, naye azibulale.
Ngokusho kukangoti udkt Lisa Mckay, oyipsychologist futhi ongumbhali wencwadi yezothando esihloko sithi: "Love at the Speed of Email", uyabonakala umuntu uma eseganga. Kuye kube nezimpawu ezithile ezimcebayo.
Kulezo zimpawu udkt Mckay ubala lezi:
1. IYASHINTSHA INDLELA AZIPHATHA NGAYO
Uma umuntu ebejwayele ukukutshela ukuthi uyakuthanda kodwa bese eshintsha nje esikhaleni kungenzeka ukuba sekukhona okushaya amanzi. Kungaba wuphawu oluqinile futhi lokuthi kukhona lapho asejabula khona uma engasavamile ukukhuluma ngezinhlelo zenu zekusasa ekubeni kade ethanda ukuba nihlele ikusasa lenu.
2. UHLALA EMATASATASA
Kufanele umqaphele umuntu ohlale ematasa. Noma ngabe kuthiwa umuntu unomsebenzi omxina kangakanani kodwa akekho umuntu ongasitholi isikhathi sokuba nomuntu amthandayo.
Kufanele uqaphele uma njalo nje esehlale ematasatasa, engasenaso isikhathi sakho - noma avele akubikele ukuthi ukhathele uma umdinga. Le nhlobo ekhonze ukuzikhipha nabangani kuyiwe ebumnandini kodwa ingafuni ukuba nawe ube khona lapho kujatshulwa khona, uboyiqaphela. 3. AKATHOLAKALI OCINGWENI
Wonke umuntu kuyenzeka angakwazi ukubamba ucingo ngenxa yokuba matasa. Kodwa-ke umuntu onomqondo osebenza kahle uye akuthumelele umqhafazo, akwazise ukuthi usaxinekile noma kuthi lapho esethole isikhathi bese ekushayela.
Nawe futhi asikho isidingo sokulokhu umxina eduze ngocingo uma kwenzekile washaya wangamthola. Kodwa-ke uma eseganga ubona ngokuthi njalo nje uma umshayela angatholakali isikhathi esiningi, ngisho wazi kahle kamhlophe ukuthi akekho emsebenzini futhi akukho lutho olumxakile.
Umuntu ogangayo uvame uku- beka izizathu ezingathi shu zokungatholakali ocingweni. Ngesinye isikhathi uzothi kuphele i- battery, noma athi yi- network njalo nje.
4. UHLALA EJAHILE
Kuyenzeka uthi ushayela umuntu ucingo avele afune ukusheshe avalelise, azwakale engakhululekile, abindwe wubala. Mhlawumbe uze akhululeke uma kunguyena okushayelile. Kungenzeka ukuba usuke umshayele ngesikhathi esingesihle, kusekhona okumbambile okungaba yiyo belu imisebenzi yokuganga.
5. AKAFUNI UMVAKASHELE Kunabantu abagoqanayo, uma uthi ufuna ukubavakashela lapho behlala khona, bafuna kube yibo abeza lapho uhlala khona. Lowo muntu ubomqaphela. Lokho kungaba wuphawu lokuthi kukhona omunye umuntu anaye - wesaba ukuthi uma umvakashele uzobona izinto eziningi.
6. KUNABANTU ABAFIHLAYO
Uma umuntu wakho enabangani abafihlayo, angabavezi uboqaphela. Umuntu othandana naye kufanele akhululeke ukukwethula ( introduce) kubangani bakhe nakwabanye abantu asondelene nabo. Kodwa-ke kusobala ukuthi uma kukhona umkhuba awenzayo, ngeke akwethule kulabo bangani bakhe.
Umuntu ogangayo umbamba nangokuqamba amanga. Unokukhuluma izinto ezingahlangani. Kuyenzeka akutshele ukuthi uphume emsebenzini wadlula endaweni ethile wabambezeleka, kuyothi ngokuhamba kwesikhathi ishintshe indaba, akutshele okunye okwehlukile.
Kusuke kukhona asuke ekufihla. Qaphela.
8. BAVUKA INDLOBANE
Mqaphele umuntu okuthi umbuza ngomoya ophansi into ethile ongakhululekile ngayo bese evele avuke indlobane, avuthe amalangabi, akugxeke. Kungenzeka ukuba uphendula kanjalo nje kukhona akwaziyo okumshisayo.
OKUFANELE UKWENZE UMA UBONA LEZI MPAWU
Udkt Mckay uthi uma kwenzeka ubona ezinye zalezi mpawu kumuntu wakho, ungaveli nje ufinyelele esinqumeni sokuthi uyaphinga bese umbhozomela.
Zinike isikhathi ubhekisise ubufakazi onabo, bese ucabangisisa ukuthi yikuphi ofuna ukukwenza.
ISITHOMBE NGABE: THE TRENT
UKUPHINGA ebudlelwaneni kungenye yezinkinga ezihamba phambili ekuxabaniseni izithandani.